May 2018 - Shop
Shop > All Articles > 2018 > May
50%ထိလျှော့ဈေးပေးမယ့် Back to School Campaign စနေပြီနော် …..။0666
Ameer Hamza May 16, 2018 3:30 am May 16, 2018
မေလအလယ်ပဲ ရှိသေးပေမဲ့ shop.com.mm ရဲ့ 50% ထိလျှော့ပေးမယ့် Back to School Campaign ကစနေပါပြီနော်။ စိန်ပန်းတွေပွင့် မိုးရိပ်မိုးယောင်သန်းပြီး မြေသင်းနံ့သင်းသင်းလည်း ရလာရင် စာသင်နှစ်တစ်ခု စတော့မှာပါ။ မိုးနံ့သင်းသင်းနဲ့အတူ ပါလာတာက ဖေဖေ၊မေမေတို့ရဲ့ …
Up to 50% Off “Back to School” is now live – Get ready to class!0430
Ameer Hamza May 16, 2018 3:30 am May 29, 2018
It is only the middle of May but that hasn’t stopped the “Back to School” Campaign to get started. It is …
ဒီနွေမှာ ဂျင်းတွေနဲ့အဆက်ဖြတ်ပြီး ဂါဝန် လှလှလေးတွေ ဝတ်ရအောင်…..။0584
Ameer Hamza May 15, 2018 9:40 am May 15, 2018
အပြင်မှာရာသီဥတုက အင်မတန်ပူပါတယ်နော်။ ဒီအချိန်မှာဂျင်းနဲ့ပတ်သက်တာ မှန်သမျှက ကြောက်ဖို့ကောင်းနေပါတယ်။ ဂျင်းတွေက ဝတ်ဆင်သူကို နွေနေပူပူမှာ ချွေးသီးချွေးပေါက်ကျပြီး စိတ်ကျဉ်းကြပ်စေပါတယ်။ နွေရာသီကိုယ်စားပြုတဲ့ ဂါဝန် လှလှလေးတွေရှိနေပြီပဲနော် ဂျင်းတွေကို အဆက်ဖြတ်လို့ရပါပြီ။ ပေါ့ပါးလွတ်လပ်တဲ့ ဂါဝန်လေးတွေက ကိုယ်တွေကို နွေရာသီမှာ နည်းနည်းသက်တောင့်သက်သာရှိအောင်လုပ်ပေးပြီး …
Dress That Can Make You to Cut Jeans Out of Your Life for This Summer0402
Ameer Hamza May 15, 2018 9:38 am June 8, 2018
Weather is particularly hot right now. And, jeans are scary in summer. They will make you uncomfortable and look like …
ဦး စာအုပ်၊ ဒေါ်စာအုပ်များအတွက် ရွေးချယ်စရာ (၅)ခု01089
Shop.com.mm က ဖက်ရှင်ချစ်သူတွေ နည်းပညာချစ်သူတွေအတွက်ပဲလို့ ထင်ရင်မှားတယ်လို့ ပြောပါရစေနော်။ ကိုယ်တွေဆီမှာ မိုးလေးဖွဲတုန်း ကော်ဖီတခွက်ဘေးထားပြီး ဖတ်လို့ကောင်းတဲ့ စာအုပ် မျိုးတွေရှိသလို၊ Instagramလို့ကောင်းတဲ့ စာအုပ် တွေလည်းရှိပါတယ်။ “အခုဖတ်နေတဲ့ စာအုပ် ကအရမ်းကောင်းတယ် လက်ကနေတောင်မချချင်ဘူး” ဒါမှမဟုတ် …
5 Options for Mr. and Mrs. Bookworm0517
Ameer Hamza May 15, 2018 9:28 am August 9, 2018
If you think www.shop.com.mm is only for fashionista and technophile, we are very sorry to say that you are wrong. …